Mandao An’i Tiorkmenistana Ireo Mpirotsaka An-tsitrapon’ny Peace Corps · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2013 3:36 GMT
Tsy ela akory, nanambara ny Masoivohon'i Etazonia any Ashgabat fa mety hakatona ny Peace Corps – fandaharanasan'ny mpirotsaka an-tsitrapo tantanan'ny Governemanta Amerikàna – any Turkmenistan ary hiala ny firenena izy ireo ny faran'ny taona 2012. Mivaky toy izao ilay fanambarana tamin'ny 31 Aogositra:
Hatramin'ny 1993, mpirotsaka an-tsitrapo maherin'ny 740, mpampianatra teny Anglisy sy fahasalamana, no nipetraka sy niasa tamin'ny faritra maro tany Turkmenistan. Noraisin'ny Peace Corps ho tena fahombiazana tanteraka ny fandaharan'asany eo amin'ny resaka fanatanterahana ny tanjona mikasika ny fampiroboroboana sy ny fifanakalozana ara-kolotsaina. Ankehitriny, misy mpirotsaka an-tsitrapo 18 miasa any Turkmenistan. Vita ny Septambra ny asan'izy ireo ary hikatona amin'ny Desambra ny biraon'ny Peace Corps any Ashgabat.
Voafetra ny fahafahana mahazo fanabeazana
Mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps mizara ny sakafony amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina misy azy any Turkmenistan. Sary nalefan'ny mpampiasa Flickr Peace Corps tamin'ny 31 Oktobra 2007 (Fanomezan-dàlan'ny Governemanta Amerikana)
Niantso mpianatra Turkmen maromaro izay mianatra any ivelan'ny firenena ny mpanoratra mba hanontany ny hevitr'izy ireo mikasika ny asan'ny Peace Corps any Turkmenistan. Maro tamin'ireo mpianatra no nilaza fa efa zatra nitantana tetikasa fampiroboroboana ny fiarahamonina ireo mpirotsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps ireo, ny lasin-dohataona ary ny vondron'ny mpampiasa teny Anglisy.
Tamin'ny alalan'io firotsahana io, nankahery Turkmen mpianatra marobe ireo mpirotsaka an-tsitrapo ireo mba hitady vatsim-pianarana hianarana any ivelany, izay manolotra azy ireo varavarankely tsy fahita firy amin'ny tontolo ivelan'ny fireneny. Fanampin'izany, nanokatra ONG any ivelan'i Turkmenistan ireo mpirotsaka an-tsitrapo hiasàna miaraka amin'ireo Turkmen mpianatra sady nanohy nanampy ny tetikasa fampandrosoana ny fiarahamonina na dia efa miala ny firenena aza izy ireo.
Nilaza ny iray amin'ireo Turkmen mpianatra any amin'ny Anjerimanontolo Amerikana any Bolgaria, izay nangataka ny tsy hanononana ny anarany, hoe[ru]:
Fony aho mbola tany am-pianarana, tsy afaka nanofinofy akory ny handeha handranto fianarana any ivelany. Fa notohanan'ny mpirotsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps aho ary nasainy nianatra teny Anglisy ary nisoratra taminà kolejy. Efa ho efatra taona no laniko tamin'izany taorian'ny nahavitako ny fianarako vao tafiditra tany amin'ny kolejy. Nanampy ahy nitady vatsim-pianarana izy ary nametraka taratasy fangatahana. Fa ny tena zava-dehibe, dia nanova ny fomba fijeriko an'izao tontolo izao izy ary koa ny fihetsiko manoloana ny zavatra rehetra manodidina ahy.
Nefa dia fampandrosoana iray hafa ikendrena ny hamerana ny fahafahan'ireo Turkmen mpianatra hahazo fandrantoana fianarana any ivelany ny fisintahan'ny Peace Corps. Noferana ihany koa ny fandaharanasa sasany tohanan'ny governemanta Amerikana toy ny Future Leaders Exchange Program (FLEX) sy ny Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) any Turkmenistan, izay hita tokoa fa mamela ny fanjakana Caspiana ho tapaka amin'ny tambajotram-pampianarana maneran-tany.
“Vahiny mpitsikilo” sa mpanome tolotra tena ilaina?
Niteraka resabe teo amin'ny Turkmen mpampiasa aterineto ny fanambaràna mikasika ny fikatonan'ny Peace Corps tsy azo ialana, mikasika ny anjara andraikitra notazonin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo tamin'ilay fandaharanasa. Mihevitra ny sasany mpisera anaty aterineto fa “mpiasan'ny” governemanta Amerikana ireo mpirotsaka an-tsitrapo. Nanambara [ru] i Tushkan, manoratra eo amin'ny Turkmen Chronicles:
Tokony efa noroahin'i Turkmenistan efa ela ireto tranona CIA ireto miaraka amin'ny “skotony mpilatsaka an-tsitrapo”.
Ny sasany maneho hevitra hoe tsy hibahan-toerana mihitsy raha ity fomba fijery ity. Namaly [ru] i Adalat Seeker :
Tushkan, dondrona sy tsy alehany ianao. Nanome zava-tsoa maro an'i Turkmenistan ireo mpirotsaka an-tsitrapo, ny tanorany, ny mpampianatra sy ny mpitsabony.
Nanampy [ru] i Mary :
Tena nanome zava-tsoa ireo Amerikana… Nampahiratra ny vahoaka Turkmen izy ireo. Izany no mahatonga azy ireo atahorana…
Nitsantsaingoka [ru] ihany koa i Merdan :
Tushkan, manana loharano tena azo antoka sy voamarina ao anatin'i Turkmenistan ny CIA fa tsy ho ny mpilatsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps akory. Tena tsy mitombina mihitsy ny tsoakevitrao…
Ao Turkmenistan, izay iray amin'ireo firenena mitoka-monina indrindra eran'izao tontolo izao, dia maro ny olona mbola feno ahiahy mikasika ny tena asa sahanin'ireo vahiny mpirotsaka an-tsitrapo eo anivon'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. [Vakio ny lahatsoratry ny Global Voices tamin'ny 21 Septambra 2011 raha mila fanazavana kokoa].
Mpilatsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps mianatra mampiasa ny vilany tanimanga hahandroana miaraka amin'ny vehivavy Turkmen. Sary nalefan'ny mpampiasa Flickr Peace Corps tamin'ny 31 Oktobra 2007 (Fahazoan-dàlan'ny Governenmanta Amerikana)
Taorian'ny fanambaràna ny fisintahan'ny fandaharanasa , tsy nisy nanome fanazavana na ny governemantan'i Turkmenistan na ny Masoivoho Amerikana. Ny tena marina, tsy vaovao ny olan'ny Peace Corps any Turkmenistan. Vao tamin'ny herintaona, nanana olana hanalavàna ny taratasy fipetrahany ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao aminy. Ao Kazakhstan mpiray vodirindrina, tsy maintsy nakatona ihany koa ny fandaharan'asa tamin'ny 2011.
Na dia eo aza ny fandehanana tsy azo ihodivirana, toa hita namela llova ara-kolotsaina maharitra teo amin'ny firenena ny Peace Corps. Araka ny fampahatsiahivan’ i Maya Saryeva ao amin'ny lahatsoratra tamberina ao amin'ny bilaogin'ny Friends of Turkmenistan:
Mbola tadidiko foana ny fahatsapako ny tebiteby sy ny fientanentanana niainako raha vao nifanakalo voalohany ny teny Anglisiko tamina PCV antsoina hoe Matthew aho. Amin'izay lafiny izay, mihevitra aho fa manampy ny Turkmen ny mpirotsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps, amin'ny fanomezana fahafaha-manatsara ny teny Anglisiny sy ny fanolorana azy varavarankely iray mitodika amin'à tontolo iray ahitana ny tena fahalalana marina mikasika an'i Etazonia. Tsy isalasalàna, maro ny PCV no nitondra zavatra tsara ho an'ny fiainan'ny mpianatra tanora izay faly nandray anjara tamin'ny lasin-dohataona na ny hetsika ara-panabeazana hafa nokarakarain'ny PCV. Raha tsy misy intsony ny Peace Corps any Turkmenistan, mety ho maro ny olona no tsy hahatsikaritra izany akory, na izany aza, tsy ho ampy fifanakalozana avy amin'ny olona avy amin'ny lafin-tany hafa amin'izao tontolo izao ny tanora, ary ho maro amin'ireo zaza no tsy hiaina mihitsy ny fahatsapàna niainako fony aho tsy maintsy niresaka voalohany tamin'ny mpirotsaka an-tsitrapon'ny Peace Corps fony aho sivy taona.